Nahoana no tokony hosolointsika? Provident Real Estate Dubai
Why Occident Estate
Ny Provident Estate dia ivon-toerana nahazo mari-pankasitrahana, ISO certificée, EJARI regulated, nohamarinin'ny RERA ary iray amin'ireo orinasam-panjakana manana mari-pankasitrahana sy manan-kaja ao amin'ny faritra.
Manana ekipa matihanina amin'ny fitantanana ny tetik'asa matihanina, manampahefana samirery, ary ny rafitra CRM farany indrindra izahay rehetra, dia samy namintina ireo mpanjifanay manana tombam-bidy tsara indrindra.
Maro ny karazana fananana azo alaina ho an'ny mpanjifany avy amin'ny mpanjifa, manomboka amin'ny singa tokana, trano, trano, trano fivarotana, birao fonenana, trano fisakafoana, trano fonenana ary tilikambo.
Ny portfolio-ny klioban'ny klioba sy ny fitantanana ny fitantanana dia andraikitsika, mandray ny fiverenana tsara indrindra amin'ny fampiasam-bola amin'ny fampiasam-bola miaraka amin'ny ezaka kely indrindra.
Tena mahomby sy tsy manan-tsaham-pahalalana ny zava-maniry, mampiditra ny teknolojia fahaiza-manaon'ny 360 ho anao mba hijery ireo toetra na dia tsy ao an-tanàna aza.
Ankoatra izay, dia misy ny fifampiraharahana amin'ny sehatry ny fananan-tany sy ny rafitra fiasan-tserasera, ary manolotra ny sehatra rehetra toy ny mpikarakara ny mpandraharaha sy ny mpampiasa, ny fivoaran'ny toe-karena, ny fanarahan-dalàna, ny fangataham-pikarakarana, sns.